February 4, 2021 - Padaethar
လူနာတွေရဲ့မျက်နာကို အရင်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ ဆရာမတစ်ဦး ထပ်မံထွက်ပေါ်
February 4, 2021 by Padaethar
လူနာတွေရဲ့မျက်နာကို အရင်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ ဆရာမတစ်ဦး ထပ်မံထွက်ပေါ် လေးစားပါတယ် ဆရာမ ကျွန်မ 11 batch က Nursingနဲ့ကျောင်းပြီးထားပါတယ် …. ကျွန်မပြည်နယ်မှာအလုပ်မဝင်တော့ပဲ သုခစံအထူးကုဆေးရုံနှင့်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်…. ကျွန်မတို့ပြည်နယ်ကုတင်၅ဝဝဆန့်ဆေးရုံတွင်အမှန်တကယ်…. လိုအပ်လာပါကကျွန်မ Dutyကိုဆင်းပေးပါမယ်လစာလုံးဝမယူပါ …. ကျွန်မပြည်နယ်ရှိတိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမ လူနာများအတွက်သာကျွန်မ ကြည့်ပါတယ်…..။ ကျွန်မဘယ်ပါတီဝင်မှမဟုတ်ပါ ဆေးရုံကုတင်ပေါ်တွင်လိုအပ်နေသောလူနာများအတွက် သူနာပြုဆရာမတယောက်အနေဖြင့်ကျွန်မတာဝန်ကျေအောင်ထမ်းဆောင်ပါ့မယ်ရှင့်…..။ Daw Phyu Phyu Sein 11 batch Nursing Clinic Owner 095601310 unicode လူနာတှရေဲ့မကျြနာကို အရငျကွညျ့မယျဆိုတဲ့ ဆရာမတဈဦး ထပျမံထှကျပျေါ လေးစားပါတယျ ဆရာမ ကြှနျမ 11 batch က Nursingနဲ့ကြောငျးပွီးထားပါတယျ …. ကြှနျမပွညျနယျမှာအလုပျမဝငျတော့ပဲ သုခစံအထူးကုဆေးရုံနှငျ့ဆေးခနျးဖှငျ့လှဈထားပါတယျ…. ကြှနျမတို့ပွညျနယျကုတငျ၅ဝဝဆနျ့ဆေးရုံတှငျအမှနျတကယျ…. လိုအပျလာပါကကြှနျမ Dutyကိုဆငျးပေးပါမယျလစာလုံးဝမယူပါ …. ကြှနျမပွညျနယျရှိတိုငျးရငျးသားညီအကိုမောငျနှမ လူနာမြားအတှကျသာကြှနျမ … Read more
တသက်လုံး SINGLE ဖြစ်ဖို့ သေချာနေတဲ့ လက္ခဏာရပ် တွေ
အသက် ၃၀ ကျော်ဆိုရင် အပျိုကြီး စာရင်းဝင် လာပြီနော်။ သင့်ကိုယ်သင် အပျိုကြီး (သို့) လူပျိုကြီး လုပ်သွားမယ်လို့ တွေးဖူးပါသလား။ တကယ်ရော တစ်ယောက်တည်း ဖြတ်သန်းသွားရမယ်လို့ သံသယ ရှိနေသေးလား။ ပိုပြီးသေချာသွားအောင် ပြောပြပေးမယ်နော်။ ၁။ သင် အသက်ကြီး နေပြီ အသက် ၃၀ ကျော်နေပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာ တစုံတယောက်နဲ့ အတူတူ လက်တွဲနေထိုင်သွားဖို့ ပိုပြီးခက်ခဲသွားတတ်ပါတယ်။ အသက်ကြီး လာတာနဲ့အမျှ ပိုပြီးရင့်ကျက်လာတတ်ပြီး တခြားသူနဲ့ အတူတူနေတာထက် တကိုယ်တည်းနေတာကို ကြိုက်နှစ်သက်သွားကြပါတယ်။ သင်အသက် ၃၀ ကျော်မှ ချစ်သူ မတွေ့သေးဘူးဆိုရင် သေချာသလောက်ရှိနေပါပြီနော်။ ၂။ သင့် အချစ် က တော်ရုံလူနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့မထင်ဘူး ခြုံပြောရရင်တော့ မာနကြီး တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ရှင်။ သင်ဟာ တော်တယ်။ … Read more
04.2.2021 မှ 10.2.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးများ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
04.2.2021 မှ 10.2.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးများ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ယခုကာလများအတွင်း အမှုဟောင်း၊ ပြဿနာဟောင်းများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် အသိ ပညာများကို အသုံးချ၍ ဆောင်ရွက်သော ကိစ္စများမှသာအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ အလုပ်တစ်ဖက်နှင့်ပညာရှာ ရပေ မယ့် ထူးခြားတဲ့ပညာရေးအောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ ကတိပျက်သွားသော စာချုပ်စာတမ်းများကို ပြန်လည်ချုပ်ဆို ရလိမ့်မည်။ စီစဉ်ပြီးမှ ပျက်ယွင်းသွားသော ခရီးစဉ်များကို ပြန်လည်သွားရောက်ရခြင်းများ ကြုံမည်။ အမှုဖြစ်၍ အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်၊ အပြစ်ပေးခံရသူ၏ အလုပ်တာဝန်များကို လွှဲပြောင်း တာဝန်ယူရခြင်းများ ရှိမည်။ ဤကာလ အတွင်း အအေးမိခြင်း၊နှာစေးခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ အအေးမခံရပါ။ ငွေဝင်များသလို အထွက်လည်းများမည်။ လက်အောက်ငယ်သားများအတွက် အနည်းငယ် စိတ်ရှုပ်နေရမည်။ အိမ်ထောင်ရေးကံမညံ့ပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် သဘောကွဲလွဲမည်။ ထီကံကောင်းနေ၍ထီထိုးလိုပါက ၉၆၅ ဂဏန်းတွဲထိုးပါ။ အလုပ်သစ် … Read more